IMacBook Pro ngaphandle kweTB, iMacOS 2 beta 10.12.5, ukukhumbula kukaWalt ​​Mossberg, kunye nokunye. Okona kulungileyo kule veki kwiSoydeMac | Ndisuka mac
Siphakathi kweVeki eNgcwele eSpain Kwaye oku kuthetha ukuba kunokwenzeka ukuba uyonwaba, into esenza sonwabe. Kule mihla yemibhiyozo kwilizwe lethu yonke into ibonakala ngathi iyama kodwa kukho abantu abaqhubeka nokusebenza kwaye kule meko thina, nangona kuyinyani ukuba sehlisile iqondo lokupapashwa kancinci, sisezantsi komwonyo . Kwi-Apple ibingeloqela kwaye kule ngqondo iindaba malunga nelizwe le-Mac bezisenzeka ukusukela oko babhengeza noPhil Shiller ophetheyo, utshintsho kuluhlu lwe-Mac kulo nyaka. Ngaphandle koku kukho iindaba ezininzi ezinomdla esizishwankathela emva kokutsiba.
Siza kuqala ngeendaba okanye amarhe okuba kulo nyaka i-Apple izakwazisa entsha IMacBook Pro ngaphandle kweTouch Bar ukuba sibona kweyona khompyutha zinamandla, iMacBook Pro.Kule ngqiqo kubonakala ngathi eKulo nyaka siza kuba nezixhobo ezitsha ngaphandle kwale TB.
Ezi ndaba zilandelayo zinxulumene nohlobo lwesibini lwaseburhulumenteni Abaphuhlisi beMacOS 10.12.5 kwaye kule meko ikwafumaneka kubaphuhlisi ababhalise kwinkqubo ye-beta yoluntu. I-Apple ikhuphe iinguqu zayo ze-beta zazo zonke izixhobo kunye bayaqhubeka ukulungisa iimpazamo ngaphandle kokongeza amanqaku amaninzi ngokubhekisele kwimisebenzi echaphazelekayo.
UWalt Mossberg, Intatheli kaSteve Jobs ayithandayo ithatha umhlala-phantsi ukuze yenzele izizukulwana ezitsha ithuba. UMossberg uthi wenze esi sigqibo emva kokucinga kakhulu, ingcinga eza kwiinyanga ezidlulileyo emva kokuba ephawule ngenkosikazi yakhe, usapho kunye nabahlobo abasondeleyo
Kwaye siyiphetha ngale Cawa ngo Ityala elitsha lika-Apple nxamnye neSwatch. Inkampani yaseCupertino imangalele inkampani yaseSwitzerland ngokusebenzisa ibheji yayo njenge "Phawula ngokwahlukileyo" Kwaye ngoku kubonakala ngathi baya kububona ubuso kwakhona phambi kwejaji.
Yonwabela iiholide eziseleyo!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » IMacBook Pro ngaphandle kweTB, iMacOS 2 beta 10.12.5, ukukhumbula kukaWalt ​​Mossberg, kunye nokunye. Eyona veki igqwesileyo kwiSoydeMac
Abathengisi be-Apple 100% bazibophelele kuhlaziyo